Equinix NY4 Avy amin'ny FXCC | Make Forex Latency ny zava-misy
Home / About / Nahoana no FXCC / Equinix Data Center
Manao ny fanindrahindrana ny zava-misy
Koa manana ny solosaina farany sy lehibe indrindra ianao. Tontolon'ny haikitry ny processeur, tendrombohitra RAM ary ny renin'ny fifandraisana amin'ny aterineto rehetra. Ny olana dia, ny varotra forex dia miankina amin'ny teknolojia ampiasainao ny mpividy broker hampita ny baiko avy aminao sy avy amin'ny tsena. Ny haingam-pandeha haingam-pandeha sy ny latency dia afaka mihinana amin'ny tombombarotra ara-barotra mety aminao. Ao amin'io tsena io, ny fotoana dia tena vola.
Eto amin'ny FXCC dia mirehareha isika amin'ny fanomezana ny fotodrafitrasa tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika mba hivarotra. Ny kilaometatra fanampiny amin'ny fotodrafitrasa dia ny server FXCC NY4 Equinix MT4.
Ny toeram-piantsenan'ny Equinix NY4 dia toerana hopitaly ary miala ny Wall Street, ao afovoan'i New York. Amin'ny alalan'ity teknolojia seriver ity, ny FXCC forex ECN broker dia mandray anjara amin'ny Equinix Financial Exchange. Ny varotra ataonao dia anisan'ireo tambajotran'ny serivisy varotra sy tambajotra banky, hita ao amin'ny foibe data center Equinix.
Fotoana marina tokoa ve ny vola eo amin'ny tsenan'ny vola ary iza no manam-potoana hiandry servisy mangatsiaka mba hamoahana ny baiko?
Equinix NY4 Data Center avy amin'ny FXCC. Ny fahefana hahatonga anao ho ampahany amin'ny tsena Forex.
Copyright © 2019 FXCC. Zo rehetra voatokana.